Blog Archives - Dib-u-Celinta Fudud
Bogga ugu weyn » Archive by categoryBlog
Waxaa jiray warar badan oo iska hor imanaya oo ku saabsan COVID-19. Si kastaba ha noqotee, fahamka aasaasiga ah ayaa ah in cudurkan neef-mareenka ah uu u nugul yahay inuu u dhinto shakhsiyaadka leh nidaamka difaaca daciifka ah ama kuwa leh dhibaatooyinka kale ee caafimaad ee jira. Marka, layaab malahan in malaayiin ...
Fiidiyowga maanta waxaan ku eegi doonnaa laabta & jimicsiga gacmaha ee ragga ka weyn 40 Rag ah 40 Jir Ka Badan - Jimicsi Laab & Hub Jimicsi oo loogu talagalay Wiilasha 40 ka Weyn Fiiri jimicsigaan tijaabada ah laga bilaabo Maalinta 40aad ...
March 11, 2020 Admin blog, Jimicsiyada No Comment
Coronaviruses-ka, oo loo soo gaabiyo Cov, waa koox ballaaran oo fayras ah oo ku dhici kara xayawaannada iyo aadanaha labadaba. Bini’aadamka, waxay soo saari karaan noocyo kala duwan oo cudurada neefsashada ah, min hergabka caadiga ah ilaa oof wareenka (infakshanka sambabka). Intooda badan fayrasyadan waa kuwa aan hawl gal ahayn oo daaweyn ayaa laga helayaa….
Maqaalkan, waxaan ka wada hadli doonnaa maaddooyinka ugu fiican ee lagu qurxiyo saladhka miisaanka oo yaraada oo waxaan la wadaagi doonnaa talooyin ku saabsan maaddooyinka aad ku isticmaali karto saladhyada si ay uga caawiso kor u qaadista dheef-shiid kiimikaadkaaga. Tilmaamahan waxay ka yimaadeen qorayaasha Dareen Ruel & Karine Losier. Waa kuwan ...
Source source: Pexels.com Maalin kasta, dadku waxay u soo baxaan sunta hawada, cuntada, iyo biyaha ay cabbaan, ma iloobaan waxyaabaha shakhsiyadeed ee loo isticmaalo maqaarka maalin kasta. Waxyaabaha sunta ah waxaa ka mid ah sunta cayayaanka, kiimikada caaga ah, iyo dareerayaasha. Inkastoo aad isku dayi karto sida ugu fiican ...
Jimicsiga iyo ka shaqeynta ayaa ah dhinacyo muhiim ah oo ah in la ilaaliyo jir ahaan iyo caafimaad qab. Si kastaba ha noqotee, jimicsiga joogtada ah ee adag wuxuu noqon karaa mid daal badan, iyo sidoo kale inuu kaaga tago xanuun iyo xanuun. Tan macnaheedu waa in, guud ahaan, soo kabashadu ay muhiim u ahaan karaan layliga laftiisa; si loo kordhiyo wax ku oolnimada ...
February 24, 2017 Jimicsiga blog No Comment
MYTH #1 Isticmaal qolka kuleylka, ama sauna, si kor loogu qaado dhididku waxay kaa caawineysaa in aad si xoog ah u yareeyso jiritaanka sunta ku jirta jirkaaga. Mid ka mid ah hababka dabiiciga ah ee jidhkaaga ee wax lagu nadiifiyo, ayaa ah xagal (dhidid). Si kastaba ha noqotee, qiimaha kaliya (1% ama ka yar) ee sunta ku jirta jirkaaga ...
January 29, 2017 Sam Soccerro blog No Comment
Nolosha Muhammad Ali
Muhammad Ali (wuxuu ku dhashay Classius Clay, 1942 - 2016) wuxuu noqday billada dahabka olimbikada ee 1960 iyo kan aduunka ee feerka culus 1964. Safarkiisa feerka wuxuu bilaabmay markii baaskiilkiisa Schwinn casaan iyo cadaan la xaday wuxuuna la kulmay booliis Joe Martin oo feerka ahaa Macallin. Muxamed Cali ...
June 13, 2016 Jimicsiga blog No Comment
Talooyin heeganka loogu talagalay biloowga Bilowga Miyaad ka fikireysaa sameynta jimicsi? Marka ugu horeysa ee tagta jimicsiga? Isticmaal tilmaan-bixinnada 10 ee bilawga bilowga ah si aad u hubiso inaad gaarto hadafyadaada. 1. Samee Tababarkaaga Wanaagsan Haddii aad doonaysid inaad ka faa'iideysato tababarkaaga ugu ...
Magaca calaamadda ProForm treadmill waxaa soo saaray ICON Health iyo Fitness. ICON Health iyo Fitness waa shirkad ku saleysan Utah oo diiradda saareysa soo saarista qalabka jimicsiga. ICON Health & Fitness waxay leedahay noocyo dhowr ah oo treadmill-ka lagu daro oo ay kujiraan NordicTrack, Healthrider, iyo Freemotion. Waxaad ogaan doontaa unugyada tuman-ka ee ...
Qof kasta oo kuu sheega inuu jiro dhaqso deg deg ah ama mucjiso kuu oggolaaneysa inaad si aad u khafiif ah oo dadaal la’aan ah been ayey sheegaysaa. Ma maqashay taas? Been bay kuu sheegayaan. Runtu waxay tahay, gabi ahaanba ma jiraan wax dhaqso ah ama mucjiso markay timaado ...